Nandeha ny vadiko na tamin'ny Estonia | Apg29
Nandeha ny vadiko na tamin'ny Estonia
Izany no iray amin'ireo tena te hahalala an'Andriamanitra Mitarika, tahaka ny hatramin'izay ny alalan '.
Aftonbladet takelaka Septambra 28, 1994.
Androany no faha-25 taonan'ny Estonia ny sambo nandeha teo ambanin'ny Ranomasina Baltika. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, Te-hizara aminareo ny fijoroana ho vavolombelona manokana ny Estonia loza avy amin'ny toko faha-tena tsara ny boky malalako alina lava indrindra.
Ankehitriny dia 25 taona nanomboka tamin'ny Estonia nilentika, ary olona 852 no namoy ny ainy. 137 ny olona ihany no tafavoaka velona.
Ny mpandeha sambo M / S Estonia nandeha teo ambanin'ny Ranomasina Baltika Septambra 28, 1994 mandritra ny niala tao Tallinn ho any Stockholm.
Nisy olona 989 tao anatiny, izay 852 maty. Momba azy ireo no 501 Swedes. 51 Zavatra tsy maty. Rehefa maty rehetra ny 137 ny olona.
Estonia loza no lehibe indrindra ao amin'ny peacetime vaky sambo mandrakariva amin'ny Nordic rano. Izany koa dia iray amin'ireo deadliest foronina toy ny nitranga nandritra ny faramparan'ny taona 1900.
Ny nankany Estonia
Avy amin'ny boky The lava indrindra alin'ny Christer Åberg.
Izany no zavatra izay tsy maintsy hitranga, na ny marimarina kokoa, zavatra iray izay tsy hitranga amin'ny fivoriana lehibe ao amin'ny Tranas afaka hatao. Ary izao no iray amin'ireo koa dia te hahalala indrindra dia mitaona, tahaka ny hatramin'izay ny alalan '.
Rehefa natao voavonjy aho, tatỳ aoriana aho, dia ao amin'ny sekoly roa ao amin'ny Baiboly. Ny faharoa sekoly Baiboly tany Jönköping Fiangonana Pentekotista. Ny anarany fohy, Pentekotista Bible College sy ny Pastora Leif Svensson no lohan'i sekoly mpampianatra. Ny sekoly dia an'ny tena Viebäcks oniversite ary naharitra nandritra ny herintaona. Izany dia tena zava-dehibe ho ahy.
Koa satria ilay fahoriana Leif Svensson matoky Aho, dia nitahiry nifandray taminy, rehefa nifarana fianarana ho ahy. Nampiasa aho avy eo mba hiantso Azy ankehitriny, ary avy eo. Indray mandeha nilaza tamin'i Leif fa efa tany amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha, ary nitory momba an'i Jesosy. Maro ny olona nandray an'i Jesoa, ary dia voavonjy ao amin'ny fivoriana, ary mety ho tena mahafinaritra.
Ny ombelahin-tongony ny foko. Te-hiaraka, niantsoantso tao an-tsaiko izany. Fa tsy tianay tsy manam-potoana mba handeha ho any amin'ny Firaisana Sovietika. Fotoana fohy taorian'ny levona ny resaka fanjakana ny goavam-be.
Rehefa niantso Leif tatỳ aoriana, dia nilaza tamiko izy ireo fa manana fanentanana kristianina lehibe ao amin'ny lapa Kaominista teo aloha ao amin'ny renivohitr'i Letonia, Riga. Dia nanontany raha te-hanatevin-daharana, ary te, mazava ho azy. Tamin'ny Tena mahafinaritra indray: Maro ny olona no voavonjy sy fahagagana sitrana ny aretina isan-karazany sJags.
Mety koa tatỳ aoriana ny faharoa lasa nankany Riga. Tamin'ity indray mitoraka ity fivoriana tao amin'ny efitrano fanatanjahan-tena lehibe. Samy fampielezan-kevitra namela soritra lalina tao an-tsaiko aho ary te-mandray anjara amin'ny fisehoan-javatra mahagaga toy izany intsony amin'ny ho avy.
Fiangonana Pentekotista in Ljungby Nanofa trano maro ary nanana fotoana izao nonina tao natory teo an-tampony. Izany dia be iray, ny efitra ambanin'ny tafo miaraka amin'ny valin-drihana sy ny skylights sloping. Nisy efitra lehibe sy tena elongated lakozia sy ny Alcove izay raha ny marina kokoa tahaka ny efitra kely. Nahafinaritra ahy toy izany koa eo amin'ny trano, izay na dia nanana lavarangana kely. Raha nitsangana teo an-davarangana, dia nanana fomba fijery tsara ny amin'ny gara, izay teo akaiky teo.
Teo amin'ny tany malalaka mahitsizoro-dakozia, izay nanana ny mena corded finday, dia niantso indray andro ny Leif Svensson. (Izany teo anoloan'ny cordless finday sy ny finday 'ny fotoana.) Rehefa nilaza Leif Svensson tamiko:
"Izahay manana fampielezan-kevitra lehibe tao an-drenivohitra an'i Estonia. Mba handeha any amin'ny lehibe mpandeha sambo avy any Stockholm. "
Ny ombelahin-tongony indray ny foko. Aho dia tena te ho avy eny. Fantatro ny fomba mahagaga fa ho satria efa nitoetra teo amin'ny fampielezan-kevitra roa teo aloha. Dia namindrako olana lehibe. Tsy ampy ny vola.
"Izaho dia tena te ho avy miaraka," dia hoy izaho tamin'i Leif, Mampalahelo fa kely ary resignedly. "Saingy tsy afaka ilay dia. Aho, tsy manam-bola tsotra izao. "
Koa satria aho amin'izao fotoana izao no tsy an'asa, dia niaina teto amin'ny sisin'ny. I mihitsy po ahy ny zavatra fanampiny. Dia nandray ny vola avy amin'ny tsy fananana asa fiantohana, ary efa ampy ihany ny kely indrindra ilaina. Isaky ny iray volana sy tapany aho, na izany aza, noho ny antony, kely kokoa ny vola. Tena countervailing noho ny antony, izay tsy tena afaka hamafin'ny. Ary rehefa nisy nilaza tamin'i Leif fa tsy manam-bola aho, nilaza fa mbola nino salama
"Tsy misy olana. Ho handamina izany. Ianao mahazo ilay dia mora lavitra, ary ny olon-kafa tsy mahalala azy. "
Izany dia noho ireo nivezivezy fa "olon-tsotra" afaka manaraka. Nandoa ny tapakila izy ireo ny tenany, ka dia izy teo afaka hanampy amin'ny fomba isan-karazany any am-pivoriana. Izy ireo, ankoatra ny hafa mba ho eo, ary mivavaka ho an'ny olona, ​​matetika ao an-jatony, izay niara-niakatra ka te ho voavonjy. Rehefa ireo olon-tsotra ihany koa Swedes nivavaka ho an'ny olona izay marary, dia sitrana izy. Izany no tena finoana-trano: nahazo iray amin'ny teny hafa, mba ho ny marina, rehefa i Jesosy fahagagana sy famantarana; koa, ankehitriny fantatro aho fa ny Baiboly Leif kilasy dia hanaraka sy handray anjara amin'ny fampielezan-kevitra. Amin'izany fomba izany, dia tsy manam-paharoa nahazo fahafahana mampihatra ny zavatra nianarany tany am-pianarana Baiboly. Izy ireo ny maso ny mahita fa niasa ny hino an'i Jesosy.
Leif Svensson Nanao ezaka mba ho tsara tokoa ve dokam-barotra ho an'ny ilay dia, mba hahafahako manaraka. Nolazainy tamiko ny fomba tsara ho fampielezan-kevitra sy ny fomba mahatalanjona izany dia ny nandeha tany amin'ny toetry ny kanto baka avy any Stockholm mpandeha ho any Tallinn. Nokasainay hitoerana azy ho cabins tao an-tsambo, ary naniry aho izao bebe kokoa ao. Alohan'ny namarana ny resaka Leif nampanantena mba hampanalainy vaovao momba ny fampielezan-kevitra ary koa ny tsara bokikely momba ny tarehy sy marevaka mpandeha an-taratasy. Andro vitsy taorian'ny resaka reko avy ny efitra fandraisam-bahiny lehibe ny fomba namely tao an-namany Sary slot teo amin'ny varavarana, ary ny feo nidoboka kely ny zavatra latsaka teo amin'ny efitrano tany. Nihazakazaka aho tenako? Ket mandra-varavarana madio mba hahitana raha izany ny lahatsoratra izay efa tonga. Eny, misy izany an-doormat. Te-hahita raha toa ny taratasy miaraka amin'ny vaovao momba ny Estonia dia tonga. Taratasy namany Sary hafa rehetra, gazety sy ny dokam-barotra amin'ity indray mitoraka ity dia tsy dia mahaliana. Faly aho nahita valopy lehibe volontsôkôlà amin'ny Leif Svensson toy ny mpandefa.
I avy hatrany nandriatra ny mainty valopy miaraka amin'ny fanondroana rantsan-tahaka ny taratasy tsindraindray antsy, nijanona ny anatiny ka hitany fa somary amateurish nanao vaovao momba Estonia Leif dia izay efa nampitondrain'i ahy. Ny masoko, dia nosarihana ela loatra ny tsara tarehy, mandray bokikely momba ny lehibe mpandeha baka lafo vidy izay hitondra anay any Estonia.
Nianatra ny sambo lehibe amin'ny manonofinofy toy fijeriny. Ny karatra diagonally nalaina avy any ambony. Ny sambo dia lavitra sy malalaka izay dia nandeha teo amin'ny ranomasina manga fotsy lava nivonto aoriana. Ahoana no afaka mandeha miaraka. Inona no traikefa nahafinaritra dia mety ho, amin'ny endriny maro.
Eny, tena te-hanaraka, fa ny ache tao an-tsaiko rehefa nampahatsiahy ny tenako fotsiny ny toe-javatra ara-toekarena aho hitako ao. Inona no tokony hataoko? Eny, angamba ny zavatra foana aho taloha rehefa azom-pahoriana aho, dia an na mila zavatra: Mivavaha amin'Andriamanitra. Nanenjana aho satria ny lohaliny ny fandriana tao amin'ny efitra kely, izay ny Alcove, sady nivavaka tamin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Nanontaniako taminy mba hanome ahy ny vola ilaina ho an'ny ny dia. Ary rehefa mivavaka amin'Andriamanitra mba hahazoana valim-bavaka - amin'ny fomba iray na hafa.
Nahatsapa mpivady kristianina iray be taona sady tao ny namako. Ny anarany dia i Rota sy Berndt ary nanana fitaovana malaza fivarotana any afovoan'i Ljungby. Ankehitriny ary avy eo, dia nampiasaina mba hitsidika azy ireo. Nahatsapa foana aho tonga soa ao aminy. Tsy mbola nisy tsy nety ho avy ao niantso Aho am-baravarana. Ary rehefa tena matetika.
Niaina akaikin'ny rano tilikambo, izay any amin'ny havoana fotsiny ambonin'ny afovoany. Ary tokony ho roa-polo minitra naka handeha ho any amin'ny trano biriky volontsôkôlà. Rehefa nitsidika ireo namana nanasa ahy kafe sy mofomamy mandrakariva izahay raha mbola nipetraka teo amin'ny mainty ambony seza teo amin'ny tany malalaka efitrano fandraisam-bahiny tsara tarehy.
Matetika izahay no miara-mijery lahatsary kristianina. Amin'izao fotoana izao, dia mbola naka ny VCR rehefa hahita mialoha voasoratra sarimihetsika amin'ny fahitalavitra. Ruth sy Berndt no tena ahitana faritra feno horonantsary kristianina maro samy hafa avy amin'ny fampielezan-kevitra sy ny fivoriana manerana izao tontolo izao. Ny sarimihetsika dia tena mahaliana ary nanana tamin'ny mpandahateny malaza. Tsy dia nahazo na ara-panahy sy ara-batana ho amin'ny fiainana rehefa tonga tany. Niresaka mazava ho azy momba an'i Jesosy, ary momba ny toe-javatra ara-panahy any Soeda.
Ruth sy Berndt nanana be dia be foana mba hilaza sy lalana mafy. Izaho koa be dia be ny fo, ka izany dia matetika ho diso aoriana rehefa nihaona. Izahay rehetra telo mazàna no tsy mahafehy ny fotoana. Dia toy izany tsy mahagaga fa matetika no lasa nandeha alina talohan'ny an-trano aho. Foana aho voaomana ho lava alina, rehefa nitsidika azy ireo aho.
Indray hariva dia tonga ny fotoana ho an'ny hafa fitsidihana ny Rota sy Berndt. Dia nandeha nivoaka ny trano ao amin'ny fiangonana Pentekotista, niampita ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby, nandeha an-tongotra namakivaky ny kianja ary avy eo dia nanavatsava ny ela tendrombohitra. Tamin'ny an-tampon'ny tendrombohitra no niverina avy teo amin'ny rano zatra tilikambo teo amin'ny lafiny arabe izay nitondra an-tranony, dia niakatra ny tohatra vato fohy ary naneno ny lakolosy.
Vao nanokatra ny varavarana ary niarahaba ahy tonga soa napetraka toy ny mahazatra. Toy ny mahazatra, dia nahatsapa fotoana izao amim-pitiavana nahazo ny namako. Tsy nahatsiaro tena tsara ny momba azy. Koa satria mbola irery aho amin'izao fotoana izao, dia zava-dehibe kokoa ho ahy ny manana namana kristianina tsara dia tsara ny mifanerasera amin'ny.
Nipetraka teo izahay, toy ny mahazatra, teo amin'ny efitra fandraisam-bahiny TV ambony seza, nanomboka Niady hevitra, nijery sarimihetsika, niresaka, nisotro kafe, nijery sarimihetsika, niresaka ... Raha fintinina, ny zavatra taloha foana isika rehefa nihaona izahay, ary nanidina ny ora toy ny mahazatra izy.
Indraindray nandritra ny hariva, dia nanomboka niresaka momba ny dia, araka izay be dia be te handeha.
"Ny Baiboly taloha mpampianatra ao amin'ny Sekoly Ara-baibolin'i Pentekosta in Jönköping, Leif Svensson, dia hanao fampielezan-kevitra iray vaovao any Eoropa Atsinanana", dia nilaza i Rota sy Berndt.
"Fa Letonia indray?", Hoy i Berndt raha nisotro kely sip ny kafe sy mihinana ny mofo.
Liana avy hatrany izy, satria nanana be liana tamin'ny fitoriana ny Evanjely any amin'ny firenena hafa, indrindra fa any Eoropa Atsinanana. Ny lahatsary flickered tao amin'ny televiziona, fa ankehitriny dia tampoka tsy misy amintsika liana ao. Ny atsy ho atsy dia ny fifantohana diany, ary efa nahazo ny namako mihitsy aza '-tsofina. Fantatr'izy ireo fa efa nanao ireo karazana nivezivezy tamin'ny lasa, ary fantany fa tena ny diany efa natao ahy.
"Tsia, Tallinn any Estonia,", hoy aho tao Smitty ny fanontaniana. "Ho fifohazam-panahy lehibe izay anion ady, Toy izany koa ho toy ny fampielezan-kevitra efa aho amin'ny tany Riga."
"Inona no mahafinaritra" tabbed Rota in raha naidiny sasany bebe kokoa foana kafe amin'ny kaopy. "Ho avy ianao?" Hoy izy nanontany, mihazona tamin'izany andro izany mandra-mofo amiko takela aho fa haka na dia mofomamy ho an'ny vao nampidina ny kafe.
"Te tena toy izany," hoy aho, "nefa misy kely snag. Aho, tsy manam-bola tsotra izao ny diany, ka tsy afaka handeha. "
Nieritreritra aho izaho tsy tena satria rehefa voalaza izany farany. Izany mpivady izany hoe efa be dia be ny vola. Dia nalainy ny malaza sy be atao fivarotana in Ljungby. Fa isika zatra miresaka an-karihary momba ny zava-drehetra, ka noho izany dia tena tsy misy mangataka teo amin'ny anjara.
Tsy mbola miresaka momba ny zavatra rehetra, fa rehefa tonga ny lakolosy sy sasany efa roa ambin'ny folo, nihevitra ihany aho fa tonga ny fotoana hamaranana ny Community. Nitohy ny resaka nandritra ny fotoana kelikely teo amin'ny varavarana fidirana alohan'ny nisaraka tamin'ny farany.
Dia nandeha nidina ny tendrombohitra sy lava toy ny mahazatra dia nanana fomba fijery lehibe ny foibe ao amin'ny maizina. Streetlamps, trano sy toeram-pivarotana tsara nandrehitra ny ao amin'ny maizina teny an-dalana miverina any ny trano eo an-tanàna ny sinema sy ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby.
Rehefa nisaraka izahay tamin'iny alina iny Berndt nieritreritra ny zavatra izay efa nambarany momba ny Estonia dia. Raha te ho any amin'ny ilay dia, nefa tsy manana fahafahana noho ny tsy fahampian'ny vola.
"Raha Chris miarahaba antsika indray ilay dia, aho hanome azy ny vola," hevitra Berndt ny tenany.
Ireo hevitra Fantatro mazava ho azy na inona na inona momba. Nilaza tamiko Berndt be tatỳ aoriana, dia nandeha mba hanome ahy ny vola ilaina, raha hiverina eo anatrehan'ny ilay dia. Ny zavatra mahagaga dia hoe tsy nataoko.
Izany no ampahany kely amin'ny mihoatra ny natoraly sy ny tari-dalana mazava. Efa nangataka ny vola any amin'izay halehanareo, fa Izaho efa nangataka ihany koa ny vadiny. Andriamanitra no miasa ankehitriny, mba tsy ho ela dia manana fahafahana hahazoana valim-bavaka.
Izao fotoana Nolazaina tamiko fa ny tsy an'asa. Isaky ny iray volana sy tapany, aho taloha mba hahazoana vola avy amin'ny tsy fananana asa fanampiny fiantohana, ary ankehitriny tonga ny fotoana indray. Izany aho nanadino tanteraka, Fa rehefa lasa aho miaraka amin'ny fanondro notapahiny manokatra ny valopy avy amin'ny tsy fananana asa fiantohana, hitako ny nandatsahany an'i fanampiny vola tao amin'ity indray mitoraka ity. Tampoka teo dia nisy ny tenako manam-bola ilay dia ho any Estonia.
Nisy zava-nitranga tao an-tsaiko. Interest in nankany Estonia intsony ao. Izany dia toa nanjavona fa izaho niandry. Fa tena mangina ato am-poko noho ny fampielezan-kevitra nomanina tany Tallinn. Nanana faniriana tsy tanteraka intsony ny mandeha any Estonia.
Nolazaiko namako Tomas, Izay naka ahy ho any amin'ny fiangonana Pentekotista, ary efa nahazo ahy Jesosy, aho izao dia nanana vola fanampiny ao amin'ny tantara. Fantany fa tena aho no te handeha ho any Estonia, fa ny toe-karena hanisy niteny tamin'ny kodia.
"Saingy avy eo izany ny sitrapoko dia tokony halehanao!" Hoy izy tampoka rehefa nilaza taminy ny vaovao momba ny vola. Na oviana na oviana aho manadino ny valiny rehefa nanaikitra grimly, fa amin'ny faharesen-dahatra lehibe namaly hoe:
Tsy tena mahalala izay nolazaiko. Tonga toa fotsiny amin'ny vavako sy ny molotro. Eto aho, efa miady mafy ary nangataka mba ho afaka ny handeha ho any Estonia. Rehefa nahazo fahafahana tamin'ny farany, no nilazako fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra.
Ary rehefa afaka izany, dia hahatakatra fa tena tsy ahy izay nilaza azy io. Izany dia ny Fanahy izay efa nampilazain'i ahy. Mba tsy hamela "ara-panahy" na cocky, toned nidina aho, na izany aza, dia kely amin'ny fampidirana:
"Tsy mahatsapa izany."
Nihevitra aho fa nitsoka kely tsara kokoa noho ny ho toy izany cocksure. Fa araka ny fanambarana fa ny raharaha farany no noresahina. Thomas tsy naka zavatra bebe kokoa - ary tsy na. Nisy zavatra nitranga tao an-tsaiko momba ny fampielezan-kevitra ao Tallinn. Ny faniriany dia tanteraka tsofina niala ka tsy afaka tena hahatakatra izany.
Nandeha aho na aiza na aiza izany fotoana izany, ary feno fankasitrahana mandrakizay aho. Rehefa afaka izany, dia tonga saina fa Andriamanitra no toy izany efa nitondra ahy tamin'ny fomba mahagaga.
Ny zatovovavy iray ao Linkoping, volana vitsivitsy monja tanora kokoa noho izaho, koa nieritreritra ny handeha eo amin'ny diany ihany. Ity vehivavy ity dia, tsy toy ny ahy, efa lehibe ao amin'ny fianakaviana kristianina. Dia toy izany no voavonjy izy, ary efa nahavita asa toy ny evanjelista ao amin'ny paroasy. Taona vitsivitsy talohan'izay efa nihaona an'i Jesosy noho ny fanavaozana ary ankehitriny niainan'i fiainana voatendry ho an'Andriamanitra.
Ny sasany tamin 'ireo namany efa nandritra ny fotoana ela niezaka nitaona azy hiaraka aminay momba izany mahatalanjona sy sahisahy dia araka izay ho dikan'ny hoe tonga any Estonia. Nefa tsy fantany fa ny fomba azo antoka ho ataony izy. Ve izy manaraka na tsia? Izy roa saina tena ao an-trano ao amin'ny efitra roa-trano in Linköping.
Eo amin'ny latabatra ao an-dakozia Cozy ihany no marina fanitso teo ilay dia an-trano hiaraka amiko. Nanana mazava ho azy ny dika mitovy amin'ny bokikely mahafinaritra momba ny tarehy mpandeha Liner, izay nampiseho ny asa lehibe eo amin'ny sambo ny ranomasina manga sy ny fotsy fanairana aoriana.
Any, ao an-trano, dia nanana ny tolona, ​​na tamin'i tena sy amin'Andriamanitra. Ahoana no hataony?
Fotoana fohy taty aoriana, dia efa nidina tany amin'ny foibe, ary efa nanao ny raharaha. Teny an-dalana an-trano fa ny hariva, tsaroako tsara izany, dia nandeha lasa ny newsstand. Indrindra fa iray amin'ireo lohateny vaventy dia mifikitra mivoaka avy any amin'ny olon-kafa, heveriko fa ny afovoan'ny telo. Dia very hevitra aho, nanopy maso kely izany raha nandalo Aho ny kiosk. Ny lohatenim-baovao, dia amin'ny lehibe mainty letters: "Ferry dia nilentika tamin'ny Baltika amin'ny alina - maherin'ny 800 maty"
Na dia eo aza ny mahatahotra sy mahatsiravina löpsedeln, ka zara raha nanamarika izany. Angamba satria nihevitra fa tsy mba nanendry Ahy, ary mitranga foana-toeran-kafa fa tsy "eto". Ankoatra izany, dia nihevitra ny diso hevitra, fa tsy vokatr'izany eo amintsika any Soeda, fa ny firenena hafa sy ny firenena. Impiry ny olona ary Izaho tsy hafa kely izany fotoana izany. Rehefa mitranga ny loza sy ny loza, fa olon-kafa foana eto amin'izao tontolo izao. Tsy hitranga any Soeda ary na dia tsy voakasika izany aho. Hafahafa eritreritra, fa mety ho indrisy.
Ny ampitso maraina, dia nipetraka tamim-pahanginana, ary nihinana sakafo maraina ao amin'ny dakozia no nataony tao ny Koba isan-karazany sy ny sandwich amin'ny salami absentmindedly aho raha nihaino vaovao tamin'ny radio Bulletin.
Newscaster niresaka momba ny loza be ao amin'ny Ranomasina Baltika. Tampoka teo Nahatsiaro ny löpsedeln efa nahita ny alina teo aloha. Baka efa nilentika, ary mihoatra ny 800 ny olona maty. Nanomboka hihaino amim-pitandremana kokoa. Ny mpanao gazety fa ny sambo efa ao amin'ny lalana avy any Estonia ho any Soeda eo afovoan'ny ny alina efa eo ambany ny onjan-dranomasina.
Estonia? Fa nisy teto Estonia aho, dia efa eo an-tanako diako? Ary teo fa Leif Svensson no nandeha, ary nanana ny fampielezan-kevitra. Efa nanao fandaharana ihany koa ny orinasa lehibe izay ho. Ankoatra izany, saika mpianatra sekoly rehetra Baiboly miaraka.
Ny eritreritro dia tapaka indray, rehefa namerina Newscaster ny anaran 'ny sambo izay nilentika ny ranomasina tany, "no anarany Estonia baka".
Tampoka teo aho ary nieritreritra mifantoka tanteraka nahateny: Estonia? Tsy hoe izany sambo lehibe nantsoina hoe izay nitondra anay ho any Estonia?
Intsony aho flakes mitsako ahy hianao, ka soraty ny sotro. Sandwich amin'ny mitsipitsipika saosisy aoka hisy izany, dia niondrika hatrany fa tsy mijery ao amin'ny gazety harian'ny olona. Anisan'ny gazety sy ny reklarnblad Nitady haingana ny bokikely mba hahalala ny anaran 'ny sambo.
Tsy ela dia hitako izany. Tsy amin-tahotra Tsy hitako ny sary miaraka amin'ny sambo goavana izay nandeha tamim-pireharehana eo amin'ny ranomasina mandroatra onja aoriana. Nitady mafy ny masoko noho ny sambo ny anarany, izay ilay voasoratra ao amin'ny taratasy mazava mainty goavana baka. Ny sambo eo amin'ny sary tsipiky tokoa i Estonia.
Nafana be ny bokikely sary tsara tarehy. News Ny feo tsy reko intsony aza. Ny hany zavatra ankehitriny nisy tao an-tsaiko dia ny anaran 'ny sambo: Estonia. Namaky azy io hatrany hatrany. Ny kely reharehan'ny firenena Baltic M / S Estonia efa nilentika ka hatrany ambany. Leif Svensson namako sy ny orinasa manontolo dia angamba efa tao anatiny. Ary Izaho koa mba ta no tafiditra.
Rehefa Teraka tato anatiko fa tena i Estonia, izay efa lavo, toted ny fanontaniana ao amin'ny lohany. I nipetraka nandritra ny fotoana ela tao an-dakozia latabatra ary nibanjina ny tao amin'ny bokikely kely amateurish dokam-barotra momba ny fampielezan-kevitra sy ny bokikely matihanina kokoa Estonia, izao toa nitsilany teo amin'ny fanambanin'ny ranomasina Baltika. Saika mampino sy Manjavozavo kely, hitako ny bokikely roa aho raha niezaka ny atambatra ny sary ny zava-nitranga. Ny eritreritro nankany Leif Svensson. Tampoka teo dia namely ahy fa tsy tokony hiantso ny vadiny, Sara. Izy tsy nety teo ilay dia tamin'ity indray mitoraka ity, toy ny nataony izy indraindray. Nanana, ankoatra ny zavatra hafa, arahin'ny Riga tamin'ny diany toy izany koa I Indray mandeha koa. Fa tamin'ity indray mitoraka ity, izy no nisafidy ny hijanona ao an-trano. Dia nanangana ny mena corded telefaonina sy dialed ny 036 isa ho Jonkoping.
Ihany vitsivitsy mety hitranga alohan'ny famantarana izy namaly. Probably Sara nipetraka niambina ny telefaonina tamin'izany andro izany, satria mety maro izay niantso ka naniry handre izay nitranga. Leif nanana namana maro ary nahafantatra mazava ho azy ihany koa maro ny olona noho ny asa. Azo antoka fa nisy ihany koa ny fianakaviana maro ny mpianatra izay te-hitady fanazavana fanampiny momba ny olon-tiany. Sara dia nanamafy fa Estonia i Leif ny sambo sy ny antoko rehetra dia tao. Dia hoy izy ny didim-pitsarana izay tsy hohadinoiko velively:
"Fa tsy be fanantenana ..."
Noho izany izy tsy nanana fanantenana fa Leif efa nanaram-. Ary tsy nanao. Izy sy ny mpitandrina hafa, Lennart Carlsson, miaraka be dia be ao amin'ny Baiboly kilasy, ny sisa amin'ny antoko, ary an-jatony hafa no maty tamin'io alina io tao ny halalin 'ny ranomasina, ka dia nilentika tamin'ny ny Estonia dimy ambin'ny folo minitra.
Efa nieritreritra momba izany hetsika mihoatra ny indray mandeha. Aho ho afaka amin'ny birao Estonia. Tsy nanaraka miaraka amin'ny nankany Estonia, dia nisafidy ny hijanona ao an-trano, satria tsy "mahatsapa" izany.
Ilay vehivavy avy any Linkoping, teny an-dalana, atao hoe Marie, nanapa-kevitra noho ny antony ny handeha ho an'ny Isiraely fa tsy ho any Estonia - na dia nanapa-kevitra ny hiaraka tamin'ny voalohany Leif Svensson ny fampielezan-kevitra diany.
Rehefa Fantatro tatỳ aoriana fa tsapako bebe kokoa ny fomba mampino Andriamanitra efa nitondra azy sy ny ahy.
Avy amin'ny boky The lava indrindra alin'ny Christer Åberg navoakan'ny Semnos mpitory . Toko faha-2: miaraka Estonia. Pejy 25-36.